Fil d'actualités du 17/12/2017
17/12/2017 - 23:00 : MAHAJANGA: Tovolahy mpangalatra finday iray niharan’ny fitsaram-bahoaka tao Mahabibo Mahajanga androany alahady 17 desambra tamin'ny 8 ora alina, ka tsy mahatsiaro tena.
17/12/2017 - 13:00 : MARC RAVALOMANANA: Niara-niombom-bavaka ho fankalazana ny jobily faha-150 taonan'ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) sy faha 500 taonan'ny Reformasiona tany Ambohitsimanova Betafo ny filoha teo aloha mivady androany.
17/12/2017 - 12:00 : ZANDARIMARIAM-PIRENENA: Nodimandry ny androany maraina tokony ho tamin'ny 4 ora sy sasany ny Jeneraly Randrianazary, Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria tamin'ny andron'ny Tetezamita.
17/12/2017 - 11:00 : IKONGO: Mpitandro filaminana miisa 9 no mbola karohina noho ny fivadihan'ny fiara nitondra azy ireo noho ny tosiky ny rano teo amin'ny "radier" ao Agnila omaly.
Archive du 20171010
Guy Rivo Randrianarisoa “Filan’ady ny fanakatonana ny TIKO”
Miha mazava ny resaka amin’izao fotoana fa manomboka ny antsojay atao amin’i Marc Ravalomanana sy izay mifandray aminy.
Fitantanan-draharaham-panjakana Mila fivoarana voadinika tsara
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly teny Androhibe ny taom-pianaran’ireo andiany faha-27 eo anivon’ny sekoly ambony momba ny fitantanan-draharaham-panjakana na ny ENAM.
Adalana tsy roa aman-tany
haba anao indray ra jean a.Ary dia efa tsy mivaky loha intsony amin’ny zava-misy mihitsy ve ianareo sa ahoana e ? Betsaka ihany anie ry jean ny fanakianana sy torohevitra nosoratana ary nalefa tany aminareo tany fa toa vao miha nitombo ihany ny adalanareo e
Lalatiana Rakotondrazafy Nifandamina tamin’i Honoré Rakotomanana
Tonga nihaona tamin’ny filohan’ny antenimierandoholona sy ny mpisolovava azy teny amin’ny Lapan’Anosikely omaly i Lalatiana Rakotondrazafy sy ny mpisolovava azy sy ny orinasany noho ny fitoriana nataon’ity filohana andrim-panjakana ity azy ireo.
FLM –CNaPS Vita ny sonia fifanaraham-piaraha-miasa
Tontosa omaly maraina teny Isoraka ny sonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny FLM ( ny Fiangonana Loterana Malagasy) sy ny CNaPS (Tahirim-pirenena momba ny Fiahiana ara-tsosialy).
Apostoly Marc Tatandraza Amin’ny volana desambra no handao tanteraka ny tany
Amin’ny volana desambra ho avy izao vao tena handao tanteraka ny tany ny Apostoly Marc Tatandraza.
Sarimihetsika tsy mifarana
Mihodinkodina ny tany. Fomba fiteny sy fomba fijery izany. Saingy miverina boribory daholo angamba amin’izao ny zanak’atidoha sy ny tsikalam-pieritreretana manoloana ny zava-miseho ka mahatsiaro ilay tononkira hoe mahaiza fetsifetsy sao hianjera sy hikodia eto amin’ity tany ity.
Pesta mihanaka eto Antananarivo Mitombo isa ireo toeram-pitiliana
Fantatra izao, araka ny fanadihadiana natao, fa misy trano lay miisa 3 ao amin’ny (CRM) Croix Rouge Malagasy Tsaralalàna, ary ny dokoteran’ny minisiteran’ny fahasalamana no manao ny TDR (Test de dépistage Rapide) momba ny olona manao fitiliana na mitondra na tsia ny valan’aretina pesta.
Fiatrehana ny pesta Mitavozavoza ny fanjakana, hoy ny CRAM
Nanakiana mafy ny fomba fiasan’ny fitondram-panjakana manoloana ny fiparitahan’ny pesta eto amintsika ny eo anivon’ilay vovonana mandalina ny hoavin’i Madagasikara na ny CRAM.
Isotry sy ny manodidina Nodiovin’ny CUA sy ny dorkasy FJKM
Nanao fanadiovana faobe tetsy Isotry sy ny manodidina ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Vehivavy Dorkasy FJKM niaraka amin’ ireo vehivavy izay efa nitoriana filazantsara teny Isotry omaly.
Fanakatonana ny AAA TIKO Nanao diabe fanoherana ireo mpiasa
Nanao hetsika fanairana manoloana ny fikasan’ny fanjakana hanakatona indray ny orinasa AAA Tiko ao Andranomanelatra ny mpiasa tao omaly maraina.
Fonjan’i Tsiafahy Mpanao fanafihana mitampidiana ireo gadra nitsoaka
Nandavaka tonelina 5 metatra niainga avy tao amin’ny toerana na “cellule” nitazonana azy no nahafahan'ireo gadra 5 nitsoaka ny fonjan’i Tsiafahy ny sabotsy hifoha alahady 8 oktobra teo,